Kalandarka beeraha Lunar | February 2020
Liiska shaqada ee beerta iyo beerta, kalandarka miraha beeraha bisha December 2017
Xilliga jiilaalka, xilliga nasashada iyo hurdada wuxuu ka bilaabmaa xilliga xagaaga ee dhirta. Tani macnaheedu maaha in shaqo la'aan kuu tahay. Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero dhirta jiilaalka, iyaga oo daboolaya barafka, ka ilaalinta cayayaanka. Waxaa jira shaqooyin lagu koriyo, beeraha, dhirta gudaha. Jardiinistaha beerta, ninkii beerta ka shaqaynayay iyo ninkii beerta ka shaqaynayay, waxa la samaynayo horraantii Bishii Disembar horraantii Bishii Disembar, ka dib markii beerta jardiiniyuhu la midoobey bishii Diisembar 2017, socodka beerta, barafka ku hareeraysan dayrka goobta: wuxuu dhib ku noqonayaa jiirka yaryar si uu u dhuubo.
Warshad kasta waxay leedahay biorhythm gaar ah, iyo hawsha beerta, geedka ama korriinka si ay isugu duweeyaan ficiladooda ay la leeyihiin biodynamics dhirta. Kordhinta jagadan ee cirka ee dayaxa, kuwaas oo dhaqdhaqaaqa iyo wejiyada si weyn u saameeya tayada biqilka abuurka iyo koritaanka sii kordhaya ee dhirta.
Kalandarka Lunar ee beerto tamaandhada 2019
Beeralayda qaar ka mid ah beeritaanka tamaandhada geedaha ayaa fiiro gaar ah u leh labada wakhtigood ee uu soo sheegayo asalka iyo meesha dayaxa ee maalinta maanta. Cilmi-baadhayaashu waxay xaqiijinayaan saameynta Earth ee dayax-gacmeedka ku saabsan noolaha noolaha, iyo waxyaabo kale, dhirta - sidaas awgeed, habkan ayaa si buuxda loogu caddeeyey. Taariikhda ugu wanaagsan ee lagu beerayo yaanyada sannadka 2019 sida ku xusan kalandarka dayax-gacmeedka ayaa looga doodi doonaa maqaalkan.
Sayidka beeraha iyo beerta beeraha ee sannadka 2019 ee Ural
Tan iyo wakhtiyadii hore, bani-aadmigu wuxuu isticmaalay dhaqdhaqaaqa jirdhiska sifooyinka si uu u calaamadeeyo qodobbada muhiimka ah ee beeraha: beerashada iyo waqtiga goosashada. Maqaalkani wuxuu diiradda saari doonaa sifooyinka jadwalka beeraha ubaxlaha ee ubaxa iyo ninkii beerta ka shaqaynayay ee Ural ah sannadkii 2019. Maxaa saameynaya wejiyada dayaxa ee koritaanka dhirta Inta badan dhirta waxay ka kooban yihiin in ka badan 80% biyaha, sidaa daraadeed soo jiidashada dayaxa waxay saameyn weyn ku yeelaneysaa iyaga, iyo sidoo kale biyaha biyaha ku jira.
Qalabka jadwalaha beeraha iyo gardarrada bisha September 2019
Bannaanka u badan u raacaan jadwalka Dayaxa, sida ay u fuliyaan shaqada oo dhan on sirqoolladooda. Qodobkani, waxaan tixgelineynaa waxa lagu beerayo bisha Sebtembar 2019 si waafaqsan kalandarkaan, sidoo kale waxaad ogaataa qaar ka mid ah sifooyinkaa. Saameynaha wejiyada dayaxa ee dhulka oo dhan Dhismo dhererka hal darajo ama mid kale ayaa saameyn ku leh noolaha jidhka ah.
Abuuritaanka geedo basbaas ah oo ku saabsan jadwalka Dayaxa ee 2019
Awowayaasheen ayaa sidoo kale dareemay in jannada jannada ay saameyn ku dhalidda beeraha beerta. Sidaa darteed kalandarka miridhku wuxuu ku dhashay, kuwaas oo bannaan oo badan oo casri ah isku dayaan in ay raacaan marka beerashada dhirta. Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad ka baran doontaa soo degitaanka basbaaska ku yaal jadwalka Dayaxa 2019. Shuruudaha gawaarida beerteyda ah ee geedo ku yaalla jadwalka Dayaxa ee 2019. Caadi ahaan, beerashada basbaaska geedo waxay ka dhacdaa Febraayo 15 ilaa Maarso 10.
Kalandarka Lunar ee jasiiradaha 2019
Saintpaulia waa warshad dalbanaysa - wakhti qalooc ah oo aan si qalad ah loo dooran ee loo yaqaan 'transplantation' ayaa burburin kara dhaqanka. Kalandarka qabsinka waxay kaa caawineysaa inaad doorato maalmaha ugu wanaagsan ee lagu beerayo iyo dib u soo celinta ubaxa guriga. Goorta la qabanayo waxqabadka sanadka 2019, akhri hoosta. Sidee dhirta u saameeyaan wejiyada dayaxa?
Qalabaynta beeraha siiriyuhu wuxuu beerayaa juun 2019
Bannaanka iyo beerta badan oo dadaal ah si loo gaaro wax soo saarka tayada sare leh ayaa doorbidaya, marka ay fulinayaan dhulka iyo beeraha, si ay isugu duweeyaan waxqabadkooda kalandarka dayaxa. Waxa aad u baahan tahay inaad sameyso Juun 2019 si waafaqsan wajiyada dayaxa, waxaad ka baran doontaa maqaalkan. Sidee wejiga moonku u saameeyaa koritaanka dhirta iyo dhalidda?
Taariikhda Lunar Soo Saarista Janaayo 2019
Kobcinta dhirta iyo daryeellidda iyaga oo raacaya kalandarka dayaxa waxa loo yaqaan beeraha biodynamic, kaas oo tixgelinaya saameynta dhulka satellite-ka ah ee koritaanka dhirta. Maqaalkani wuxuu u taagan yahay jadwalka Dayaxa ee Janaayo 2019 - wuxuu ku qoraa maalmaha wanaagsan iyo kuwa xun ee beerto, oo kugula taliyay taariikhda shaqo qabashada si loo daryeelo.
Kobcinaha kalandarka Lunar ee bisha November 2019
Qiyaasta saamaynta Moon ee ku saabsan geedi socodka bayoolojiga ee ka socda Dunida, bini-aadamku muddo dheer ayaa la ogyahay, iyo awowayaashayadu, oo aan si buuxda u fahmin sababaha asaasiga ah ee dhacdadan, waxay barteen inay u adeegsadaan faa'iidadooda, marka lagu daro goynta noocyada kala duwan ee beeraha. Kalandarka Lunar ee loogu talagalay ujeeddadan waxay noqon kartaa mid waxtarka leh maaha oo kaliya beeraleyda ama xagaaga degganaha, laakiin sidoo kale lover of dhirta indoor.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kalandarka beeraha Lunar 2020